काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सलार्ही जिल्ला इन्चार्ज तथा जनकपुर ब्युरो सदस्य कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेपछि हात र टाउकोमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रहरीले भिडन्त भएको बताएपनि उनको गैरन्यायिक हत्या भएको पाइएको छ ।
विप्लव समुहको दाबीलाई टेवा पुग्ने फोटो सार्वजनिक भएको छ । विप्लव नेकपाका अनुसार सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका वडा नं १ लखन्तीमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सुरुमा दुइटै हात भाँचेको (दायाँ हात दुइ -दुइ ठाउँमा जुन तलको फोटोमा) देख्न सकिन्छ । त्यसपछि टाउकोमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको र पछि प्रहरी आफैले उनको हातमा पेस्तोल राखिदिएको दाबी विप्लव नेकपाले गरेको छ ।
घटनास्थलबाट प्राप्त तस्विर यस्तो छ ।
तस्विर : संञ्चारकेन्द्र
उनको हत्या गरिएपछि प्रहरी आफैले केहि समयपछि उक्त स्थानबाट पौडेलको शव उठाएको थियो । त्यसपछि उनको शवलाई गाउँलेले थाहा नपाउँने गरि जिल्ला अस्पताल मलंगवातर्फ लगिएको थियो । उक्त स्थानमा पछि पत्रकारहरु पुग्दा रगत बगेको मात्र देखिएको थियो ।
बिहिबार दिउसो विप्लवका कार्यकर्तासँग भिडन्त भएको समाचार प्रहरी आफैले सार्वजनिक गरेको थियो । प्रहरीको दाबी अनुसार उनको साथबाट पेस्तोल बरामद भएको छ । तर, विप्लव नेकपाका अनुसार प्रहरीले उनको हत्या गरिसकेपछि प्रहरीले आफ्नै पेस्तोल उनको हातमा राखेको थियो ।
स्थानीयका अनुसार त्यहाँ कुनै भिडन्त भएको थिएन र गोली चलेको आवाज पनि सुनिएको थिएन् । उनलाई गिरफ्तार गरिसकेपछि एकान्तमा लगेर हत्या गरिएको स्थानीय बताउँछन् । तर प्रहरी भने दोहोरो भिडन्तमानै मारिएको दाबी गरिरहको छ ।
प्रहरीको एउटै जवाफ छ 'सुरक्षा जाँच गर्न खोज्दा विप्लवका जिल्ला इन्चार्जले प्रहरीमाथि गोली चलाए, त्यसपछि प्रतिकार गर्दा उनी मारिएका हुन् ।’
मृतकका परिवार र आफन्तले घटनाको निष्पक्ष छानविनको माग गरेका छन् । मृतक पौडेलका ७२ वर्षीय बुवा खिलकराज पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा छोरामाथि गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको बताएका छन् ।
‘नेपालमा गणतन्त्र होइन्, लुटतन्त्र आएको छ । लुटतन्त्रमा भ्रष्टाचाविरुद्ध बोल्नेलाई यसरी नै गोली हानेर मारिन्छ ।’ छोराको मृत्युपछि विक्षिप्त बनेका बुबा खिलकराज पौडेलले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘प्रहरीले आफ्नो छोराको दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भन्ने झुठो हल्ला फिँचाएको छ । यसको सत्य–तथ्य छानविन होस् ।’
खिलकराजले घटना भएको दुई दिन भैसक्दा समेत प्रहरीले छोराको शव बुझ्न आउनु भनेर खबर समेत नगरेको उनको गुनासो छ । घटनापछि मृतक पौडेलका बुवाआमा, श्रीमती, दुई छोरा–छोरी र भाईबुहारीसहित घरका सबै सदस्य शोकमग्न छन् ।
प्रहरीको गोली लागेर पौडेलको मृत्यु भएको खबर थाहा पाएदेखि नै श्रीमती कला र छोरी कामना पटक–पटक मुर्छित भइ रुवावासी गरिरहेका छिमेकीले बताएका छन् ।
सर्लाहीबाट एउटा राजनीतिक हत्याको घटना सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक बृत्तमा तरंग फैलिएको छ । विप्लव नेकपाले गैरन्यायिक हत्याको बदला एकिकृत जनक्रान्तिमार्फत लिने चेतावनी दिइसकेको छ ।
प्रहरीबाट मारिने पौडेल को थिए ?
बागमती नगरपालिका धरहरामा सागरनाथ वन परियोजनाको करिब ४ हजार बिघा जग्गा भु-माफियाहरुले कब्जा गर्न खोजे पछी विप्लव नेकपाले कब्जा गरी सुकुम्बासीहरुलाई राखेको थियो । प्रहरीले सो जग्गा खाली गर्ने क्रममा यसअघि पनि गोली चलाएको थियो ।
घर जग्गा नभएकालाई मूर्तिया क्षेत्रमा जग्गा दिलाउने, घर बनाउन सहयोग गर्ने आदि काममा कुमार सक्रिय थिए । उनको पक्षमा सारा वस्तीनै थियो । कुमारको एक इसारामा ५–७ हजार मानिस तुरुन्त सडकमा आउन तयार हुन्थे ! तर, एक्कासी उनको किन सरकारले हत्या गर्यो गाँउनै शोकाकुल बनेको छ ।